Public Health in Myanmar: Gestational Diabetes
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန် ဆီးချိုရောဂါ
ကိုယ်ဝန် မဆောင်ခင်နှင့် ကလေး မွေးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရောဂါကို မတွေ့ရပဲ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်၌သာ ဆီးချိုရောဂါကို စမ်းသပ် တွေ့ရှိရသည့် ဆီးချို အမျိုးအစားကို Gestational Diabetes (GD) ဟု ခေါ်ပါသည်။ ဆီးချို ရောဂါတွင် သွေးထဲ သကြားဓါတ် များခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လက္ခဏာ တချို့သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အမျိုးသမီးများ ခံစားရသော ပုံမှန် လက္ခဏာများနှင့် လွန်စွာ ဆင်တူ သောကြောင့် အတိအကျ စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်ပါက ဆီးချို ရောဂါ ရှိမရှိ သိရန် မလွယ်ကူပေ။ စမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်း မပြုလုပ် မိသဖြင့် ဆီးချို ရှိကြောင်းကို မသိလိုက်ရပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင် သက်တမ်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့သော် ကလေးနှင့် မိခင်အတွက် နောက်ဆက်တွဲ ရေရှည် ဆီးချို ပြဿနာများ ဖြစ်လာ နိုင်ပေသည်။ ဆီးချိုနှင့် ပုံမှန် ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်တွင် အမျိုးသမီးများ ခံစား ရသည့် လက္ခဏာ တချို့ ဆင်တူ သော်လည်း ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ လုံးဝ ခြားနားပြီး ကုသမှု မှာလည်း လုံးဝ မတူ သည်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတိုင်း နားလည် ထားသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆီးချို ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသည်ဟု သတ်မှတ် ခံရနိုင်သည့် အမျိုးသမီးတိုင်း ဆီးချို ရှိမရှိကို မဖြစ်မနေ စမ်းသပ် စစ်ဆေးသင့်ပြီး ရောဂါ ရှိကြောင်း စမ်းသပ် တွေ့ရှိပါက သင့်တော်သော ကာကွယ် ကုသမှုများကို ဆောင်ရွက် သင့်ပါသည်။
ဆီးချိုရောဂါသည် ပန်ကရိယမှ ထုတ်လုပ်သော အင်ဆူလင် ဟော်မုန်းကို ဆဲလ်မှ ရရှိမှုမညီမျှခြင်း သို့မဟုတ် ထိရောက်စွာ အသုံး မပြုနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် သွေးထဲ၌ သကြားဓါတ် လွန်ကဲခြင်း ( Hyperglycaemia) ဖြစ်သည်ဟု ယခင် တင်ပြခဲ့သော Diabetes Mellitus နှင့် အင်ဆူလင် ဟော်မုန်း ဆက်နွယ်မှုနှင့် Diabetes Management and Complications နှစ်ခုတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဆီးချို ရောဂါ အကြောင်းကို လုံးဝ လေ့လာထားခြင်း မရှိ သေးသည့် စာဖတ်သူများ အနေဖြင့် အရင် Post နှစ်ခုကို ဖတ်ပြီးမှ ယခု တင်ပြမည့် Gestational Diabetes ကို ဆက် ဖတ်သင့်ပါသည်။ ဆီးချို ရောဂါတွင် Type 1 နှင့် Type2နှစ်မျိုးရှိရာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန် ၌ ဖြစ်သော ဆီးချိုရောဂါသည် အများအားဖြင့် အ၀လွန်ခြင်းနှင့် တွဲလေ့ရှိသည့် Type2မှာ ၉၈% ဖြစ်ပြီး Type 1 မှာ ၂% ဖြစ်ပါသည်။
Risk Factors of Gestational Diabetes ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အချက်များ
ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ စနစ်တကျ သုတေသနပြု မှတ်တမ်း တင်ထားသည့် နိုင်ငံများ၏ လက်ရှိ စာရင်းဇယားများ အရ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်၌ ဆီးချို ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသည်ဟု သတ်မှတ် ထားခြင်း ခံထားရသည့် အမျိုးသမီး အတော် များများတွင် ဆီးချို ရောဂါ လက္ခဏာကို စမ်းသပ် တွေ့ရှိ နေရသည့်နှုန်းမှာ ယခင်ကထက် ပိုမို များပြားလျက် ရှိပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၌ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်သော အခြေအနေ တချို့မှာ ...
(၁) အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်မှ ကလေးယူခြင်း၊
(၂) မိသားစုအတွင်း၌ ဆီးချိုရောဂါ ရှိခြင်း၊
(၃) သန္ဓေသား ပုံမှန်ထက် ကြီးထွားသည့် ကလေးကို ယခင်ကိုယ်ဝန်များ၌ မွေးဖူးခြင်း၊
(၄) ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အ၀လွန်ခြင်း (BMI >27 in Asian & BMI >30 in Caucasian and others)
ထို့အပြင် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံး လေ့လာ တွေ့ရှိ ထားချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး ၁၀-၁၅% မှာ Gestational Diabetes ကို စမ်းသပ် တွေ့ရှိရပြီး အာရှ၊ အိန္ဒိယ၊ ပစိဖိတ်ကျွန်းနှင့် သြစတြေးလျား ဌာနေတိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီးများတွင် ဥရောပ လူဖြူမျိုးနွယ် ကော့ကေးရှန် များထက် ရောဂါ ရရှိသည့် ရာခိုင်နှုန်း ပိုများသည်ဟု သိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါ လေ့လာ ထားချက်အရ အာရှနွယ် မြန်မာ အမျိုးသမီးများ သည်လည်း ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ် ဆီးချို ဖြစ်နိုင်ခြေများသည့် စာရင်းထဲပါနေသဖြင့် ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ် အထက်ဖေါ်ပြပါ အခြေအနေထဲမှ အနည်းဆုံး တခုနှင့် တိုက်ဆိုင်နေပါက ဆီးချို ရောဂါ ရှိမရှိကို မိသားစု ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်၍ မဖြစ်မနေ စစ်ဆေး သင့်ပါသည်။ Type 1 ဖြစ်ပွားနှုန်း နည်းသော်လည်း လုံးဝမဖြစ်နိုင်သည့် အခြေအနေ မဟုတ်သဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ပိန်လွန်းသော အမျိုးသမီးများ အားလည်း Type 1 ဆီးချို ရှိမရှိ စစ်ဆေး သင့်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ခြင်းသည် မမျိုးဥနှင့် ဖိုသုတ်ကောင်တို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် Zygote ခေါ်သန္ဓေ သားလောင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး မိခင်၏ သားအိမ်၌ သန္ဓေသား ကြီးထွားစေသည့် ကိုးလကျော် ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကာလ၌ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲနှင့် သန္ဓေသားကြီးထွားမှုတို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အင်္ဂါအဖွဲ့စည်း အသီးသီးရှိ အလုပ်လုပ်မှုစနစ် တချို့ကို ပြောင်းလဲစေပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သည့် လက္ခဏာ များကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများ ခံစား ရလေ့ရှိပါသည်။ အစာခြေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်း (GIT) တွင် gonadal ဟော်မုန်း မြင့်တက်ခြင်း ကြောင့် အစာခြေမှု စနစ်ကို ထိခိုက်ပြီး ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ စိတ် မတည်မငြိမ် ဖြစ်ခြင်း ကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဆီးစွန့် အင်္ဂါ အဖွဲ့အစည်းတွင် သားအိမ်မှ ဆီးအိတ်အား ဖိထားသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ကျောက်ကပ်၏ အရည် စစ်ထုတ်နှုန်း (Glomerular filtration rate) မြင့်မား လာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ဆီးများများ သွားခြင်းနှင့် မကြာခဏ သွားခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အသက်ရှူ အင်္ဂါ အဖွဲ့အစည်းတွင် အသက်ရှူနှုန်း မြန်လာခြင်းကြောင့် အဆုပ်၏ ပုံမှန် လေ၀င်လေထွက်နိုင်သည့် အကျယ်အ၀န်း (Tidal Volume) များ လာပြီး ချွဲသလိပ်များ အထွက်များ လာသည်။
နှလုံးသွေးကြော အဖွဲ့အစည်းတွင် သွေးအထုတည် များလာခြင်းနှင့် နှလုံးမှ သွေးလွှတ်ကြောသို့ ထုတ်သည့်အား (Cardiac Output) များခြင်း တို့ကြောင့် သွေးဖိအား များလာစေပြီး နှလုံးသို့ ပြန်လာသော သွေးပြန်ကြော၏ သွေးစီးမှု နှေးကွေး လာသောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်း အထူးသဖြင့် ခြေသားလုံး တ၀ိုက်တွင် သွေးပြန်ကြောများ ထုံးပြီး သွေးပြန်ကြော ပိတ်ဆို့ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ် အမျိုးသမီးများ ခံစားရသည့် လက္ခဏာတချို့သည် ဆီးချိုရောဂါတွင်လည်း တွေ့ရပြီး မူးဝေခြင်း ပျို့အန်ခြင်း၊ ဆီး မကြာခဏ သွားခြင်းနှင့် သွေးဖိအား များခြင်း စသည့် လက္ခဏာ များသည် သာမာန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအတွက် ပုံမှန်ဖြစ်၍ စိုးရိမ် ဖွယ်ရာ မရှိသော်လည်း အကယ်၍ ဆီးချို (Gestational Diabetes) ကြောင့် ဖြစ်ပါက အထူးစိုးရိမ်ရပြီး သွေးထဲရှိ သကြားဓါတ်ကို ပုံမှန် ဖြစ်အောင် ချက်ချင်း ထိန်းညှိပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
Complications of Gestational Diabetes ဖြစ်လာနိုင်မည့် ပြဿနာများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆီးချို ရရှိထားပါက ကလေးနှင့် မိခင် နှစ်ဦးစလုံး အတွက် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ ရှိသဖြင့် ပြဿနာကို မကြီးထွား လာစေရန် ကာကွယ် ကုသရပေမည်။ သာမာန်အားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆီးချို ရရှိသော အမျိုးသမီးများသည် တနှစ်မှ ၁၀ နှစ် အတွင်းတွင် Type2နာတာရှည် ဆီးချို ရောဂါကို ရရှိ သွားနိုင်ပါသည်။ ရေတို ကာလတွင်လည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးထဲ သကြားဓါတ်ကို ကောင်းစွာ မထိန်းချုပ် နိုင်ပါက မွေးဖွားသည့် အချိန်တွင် ကလေး ခန္ဓာကိုယ် ကြီးမားခြင်း။ ကလေးသေနှုန်းနှင့် ပုံမှန် မဟုတ်ပဲ မွေးဖွားရသည့်နှုန်း တက်လာခြင်း စသည့် အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင် ရနိုင်ပါသည်။ ရေရှည် တွင်လည်း မွေးဖွားလာသော ကလေးအား သတိကြီးစွာ မစောင့်ရှောက်ပါက ကလေးဘ၀ တလျှောက်တွင် အ၀လွန်၍ ၁၀ ကျော်သက် အရွယ်တွင် ကလေးမှာ ဆီးချို ရောဂါ ရရှိနိုင်ပါသည်။ မိခင် အတွက်လည်း ကလေးမွေးပြီး နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း နာတာရှည် ဆီးချိုရရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ဆီးချိုကို ကောင်းစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ကလေးမွေးပြီး ကာလတွင်လည်း ဘ၀ လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းကာ အာဟာရ၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းနိုင်ပါက မိခင်တွင် ရောဂါရရှိခြင်းမှ ၅၈% လျှော့သွား နိုင်ပါသည်။
Diet and Exercise အဟာရနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် အစာအဟာရ လုံလောက်စွာ စားသုံးရန်လိုပါသည်။ Glycaemic လျှော့နည်းသည့် ကာဗွန် ဟိုက်ဒရိတ်ကို အကန့်အသတ်ဖြင့် မနက်၊ နေ့လည်၊ ညနေစာအပြင် အစာစားသည့် အကြိမ်တိုင်းတွင် အနည်းငယ်စီ ပါဝင်အောင် ထည့်စားရန် လိုပါသည်။ အင်ဆူလင် ထိုးဆေး အသုံးပြုရန် လိုအပ်မှု လျှော့နည်းစေရန် ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ် စားသုံးသည့် ပမာဏကို ခန္ဓာကိုယ် အတွက် လိုအပ်သည့် စုစုပေါင်း ကယ်လိုရီ၏ ၄၀% အထိသာ ကန့်သတ် စားသုံးသင့်သည်။ မနက်ပိုင်းတွင် အင်ဆူလင် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ပိုများ သောကြောင့် မနက်စာတွင် ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ကို အနည်းငယ်သာ စားသုံးသင့်ပါသည်။ သွေးထဲ သကြားဓါတ် မြင့်တက်လာမှုကို လျှော့နည်း စေရန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၌ တနေ့ လျှင် မိနှစ် ၃၀ ခန့် နေ့စဉ် ပုံမှန် သင့်တင့်သော လေ့ကျင့်ခန်း တခုခုကို လုပ်သင့်ပါသည်။
Follow up Programmes နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ဆောင်ရန်လိုသည့် အချက်များ
GD ဖြစ်ခဲ့သော အမျိုးသမီးများသည် ကလေးမွေးပြီး ၂-၄ လအတွင်း Glucose Tolerance Test ဟု ခေါ်သော ဆီးချို စစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ် သင့်ပါသည်။ ဆီးချို မတွေ့ရှိပါက ဆက်လက်၍ နှစ်စဉ် သို့မဟုတ် နှစ်နှစ် တကြိမ် အမြဲ စစ်ဆေး သင့်ပါသည်။ GD ရရှိဖူးသည့် အမျိုးသမီးတိုင်း သက်ဆိုင်သည့် ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင် ညှိနှိုင်းကာ ဘ၀လူနေမှု ပုံစံကို ပြောင်း၍ အဟာရ၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းချုပ်ခြင်း နှင့် မိသားစု စီမံကိန်းတို့ကို စနစ်တကျ စီစဉ်ပြီး လိုက်နာ ဆောင်ရွက် သွားရမည်။
Labels: Diabetes, Non-communicable disease, Reproductive Health
ဗဟုသုတအလို့ငှာ ဖတ်ရှုမှတ်သားသွားပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးပို့စ်တွေအတွက် ၀မ်းသာစွာ၊ နှစ်ခြိုက်စွာ၊ အကျိုးရှိစွာ ယူဆောင်သွားပါတယ်။
စာလာဖတ်ပြီး အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ပိုစ့်တွေကို ဖတ်သွားပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားမလည်တာတွေ တွေ့ရရင် ကိုယ်သိထားတာတွေကို အကျိုးရှိအောင် ပြန်လည်အသုံးချတဲ့အနေနဲ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို အကြံပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
I guess you meant 'gestational'. Sorry, I thought I should point this out. Hope you don't mind.
အခုလို အသိပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Anonymous. ဟုတ်ပါတယ် Gestational Diabetes ပါ စာရိုက်မှားသွားတာ သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ ကျွန်မ Admin ကို ပြင်ဖို့ အကြောင်းကြားပြီး ပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်။
မြန်မာပြည်သားတွေ အတွက် ကျန်းမာရေးဘလော့ဂ်လေးဟာ